Ego ole ka ị nwere ike iji Google AdSense nweta? - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
Ego ole ka ị nwere ike iji Google AdSense nweta?
Ụdị ọkwa:Adsense / Nweta ego n'ịntanetị
Oge ịgụ ihe:4 nkeji na -agụ
Nwere ike nweta ihe ọ bụla 50 Dollar ka 1000+ dollar kwa ụbọchị site na Google AdSense. Iji mezuo ebumnuche a ma ọ bụ karịa, ị kwesịrị ị na-enwe àgwà okporo ụzọ na kwesịrị ekwesị atụmatụ mmejuputa iwu.
Dị ka Google AdSense bụ ngwaahịa nke Google. Ọtụtụ nde dollar na-agba ọsọ mgbasa ozi na ịntanetị site na google. Ha na-akwụ Google ụgwọ maka mgbasa ozi iji wetara ndị mmadụ ọrụ.
Google na enye ndi nkwusa ohere igosipụta mgbasa ozi na webusaiti ha na nloghachi Google tinyekwara onye nwe webusaiti na-enweta ego mgbe mmadụ pịrị aka na mgbasa ozi.
E nwere ọtụtụ nde ebe nrụọrụ weebụ na ịntanetị. N'ime ha, ọtụtụ nwere ezigbo ndị ọbịa kwa ụbọchị.
Lee Google na-arụ ọrụ dị ka etiti. Ọ bụrụ na ị nwere ebe ikpo okwu nke onwe gị dịka WordPress, ihe 30% Akụkụ nke ego na-enweta Google, na ndị ọzọ 70% bụ nke gị.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-eji Google onwe ịde blọgụ n'elu ikpo okwu blogger.com, na nke a Google na-eme 40%.
Ego Site AdSense
Ego Ole Ka I Nweta
Enweghị iwu siri ike na ngwa ngwa na ole ị gachara na weebụsaịtị gị, ego ole ị ga - enweta site na AdSense? Ọ dabere kpamkpam na ụdị isiokwu ị na-ede.
Ime ka o dokwuo anya, n'ozuzu, ọgwụ metụtara ahụike ọgwụ bụ ụgwọ dị elu kwa Pịa. Ọ na-amalite mgbe 1 ka 2 dollar na mfe na-aga ọbụna 50 dollar kwa Pịa. Nke a pụtara na ụfọdụ ndị ọbịa bịara na webụsaịtị gị, gụọ ederede gị wee pịa mgbasa ozi iji nweta ọrụ ahụ, ị ga-enwe 70% nke CPC niile, na ndị fọdụrụ 30% dị n'akpa Google.
Ọmụmaatụ, Have hụla ọtụtụ ndị na-achọ ịntanetị maka “ọgwụgwọ ntutu ntutu”. Ọ bụrụ na ị dee edemede na isiokwu a. Will ga - ahụ CPC n’enweghị nsogbu ọ bụla 7 ka 10 dollar kwa Pịa. Ọ bụrụ na ịnweta ọnụọgụ dị mma nke ndị ọbịa, ị nwere ike mfe ime gburugburu $50 kwa ụbọchị.
N'akụkụ aka nke ọzọ, na-akọrọ m ahụmahụ m, mgbe m bidoro njem mbụ m n’enweghị ihe ọmụma, Echetara m na ọ bụ ọdachi kachasị njọ. The reason because I wrote articles on the topic with no CPC. Ndị ahịa anaghị akwụ ụgwọ maka isiokwu m dere maka iche ndị na-ege ntị. Ọ bụ banyere abụ uri. N’ezie ị na-achị ọchị n’oge a. Enwere m ezigbo ihe ọmụma banyere ya mana enweghị uru ọ bụla ma ọ bụrụ na ịgbanwere nke a ka ọ bụrụ ezigbo ego.
Edere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 gbakwunyere isiokwu mechara chọpụta na anaghị m emepụta ego karịa 5 dollar kwa ọnwa. Ihe ndakpọ olileanya ahụ bụ n'ezie. Ọ bụ n'ihi na amaghị m eziokwu ahụ ị chọrọ ilebara anya ole isiokwu a na-akwụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụla, mgbe ahụ ị kwesịrị ịhapụ isiokwu ahụ n'ihi na ọ naghị ewepụta ezigbo ego na Google AdSense.
Mụ onwe m na-atụ aro site n'ahụmahụ m, ị kwesịrị ị na-achọ isiokwu CPC tupu ị na-ede otu isiokwu. Gaa maka nyocha isiokwu ị kwesịrị inwe ọtụtụ ihe ọmụma ị ga-ede 100 + isiokwu nwayọọ. ọ bụrụ n’ị bido isiokwu mana n’enweghị nnukwu ihe ọmụma ọ pụtara na ị ga - akwụsị n’oge na - adịghị anya.
Ga-agụ: Etu esi ewu ulo oru Blog nke nwere ike inweta ezigbo ego
Mkpokọta weebụsaịtị ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ anaghị eche banyere ọsọ weebụsaịtị. Ọ bụ ihie ụzọ ha. Ha aghaghi ima eziokwu na webusaiti kachasị dị mkpa mgbe ha na-enweta ego na Google AdSense.
Google AdSense na - enyere gị aka inweta ego site n’igosipụta ọkọlọtọ mgbasa ozi dị iche iche na webụsaịtị gị. Ọ bụ ụdị koodu dị n’azụ websaịtị mgbe mmadụ bịara na websaịtị gị. Koodu ederede na-agba oge ọ bụla ma belata oge mmeghe weebụsaịtị.
Ohaneze, oge kwesịrị ịdị n'ime 2 ka 3 sekọnd mana mgbe ị wụnye koodu edemede, kedu ihe na - eme na ọ na - amalite iwere 10 ka 15 sekọnd iji mepee weebụsaịtị. N'oge ahụ, onye oru adighi acho ịnọ ogologo oge. Ha na-pịa bọtịnụ azụ, ibiaghachi azu, ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ.
Mgbe ahụ, Etu ị ga - esi nweta ego? ma ọ bụrụ na ndị ọbịa adịghị eleta ebe nrụọrụ weebụ gị. Ha anaghị ahụ ihe ọ bụla n'ime oge. N'ezie, nke a bụ ọnwụ nke nnweta site na Google AdSense.
Maka nke a, ị chọrọ a ngwa ngwa-loading mba, nke ahụ nwere ezigbo nzaghachi sava. Ụbọchị ndị a Bluehost na-enye ọrụ magburu onwe ya. Ọbụghị naanị nke a kamakwa, ha na-enye atụmatụ ndị ọzọ dịka Asambodo SSL na ndị ọzọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ogo Google taa na n'ọdịnihu.
Nke gara agaO siri ike inweta ego na mgbakwunye mgbakwunye?
Ọzọ PostCan nwere ike ịmekọrịta mgbakwunye yana AdSense?
Can nwere ike ịmekọrịta mgbakwunye yana AdSense?
Ọ bụ ahịa Mgbakwunye Amazon kwesịrị ya?
Nwere ike Mmụta Nweta Ego Online?